Mugadziri Wezvidhori Zvemabhatiri Anotsanangura Kutenda Kwake | Kubvunzurudza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
KUBVUNZURUDZA | MASSIMO TISTARELLI
Purofesa Massimo Tistarelli musayendisiti paUniversity of Sassari kuItaly. Ndemumwe wevapepeti vemagazini nhatu dzesayenzi uye akabatsira pakunyora nyaya dzakawanda dzine chokuita nesayenzi. Anoongorora zvinoita kuti vanhu vazive kuti uyu ndinhingi uye zvinhu zviri nyore zvakadai sokugamha bhora. Akabva agadzira zvidhori zvemabhatiri zvinoona, kuti zvitevedzere zvinoitwa nevanhu. Vanyori veMukai! vakavabvunza nezvebasa ravo semusayendisiti uye kutenda kwavo.
Mhuri yenyu yaipinda chitendero chipi?
Vabereki vangu vaipinda Roma zvezita. Pandaikura, ndaifarira nyaya dzinoramba kuti kuna Mwari. Ndakadzidziswa kuti vanhu vakatanga vari mhuka uye ndaitobvuma kuti ndicho chokwadi. Kunyange zvazvo ndakanga ndisingatendi kuti kuna Mwari, pasi pemwoyo wangu ndaiti kune mumwe munhu ane simba kutidarika. Saka ndakabva ndatanga kuongorora dzidziso dzechiBuddha, chiHindu, uye chiTao asi hapana chakandigutsa pane zvandakawana.
Kubvira ndichiri muduku, ndaifarira zvemichina. Ndaiwanzodambura-dambura matoyi angu emagetsi ndobva ndatanga kubatanidza chimwe nechimwe. Baba vangu vaiita basa rokuona mashandiro anoita maredhiyo nemafoni saka ndaigara ndichivanaya nemibvunzo nezvebasa ravo.
Basa renyu somusayendisiti rinosanganisirei?
Ndakadzidzira zveelectronic engineering paUniversity of Genoa, uye ndakadzidzira nezvokugadzirwa kwezvidhori zvemabhatiri. Ndakanyanya kuona nezvemashandiro anoita ziso remunhu uye kudzidzira kugadzira zvinhu zvinoedza kutevedzera mashandiro aro.
Chii chinokushamisai nezvemashandiro anoita ziso?
Mashandiro arinoita anoshamisa. Rinogona kukuudza kuti chawaona chii. Somuenzaniso, chimbofunga zvinoitika paunogamha bhora. Paunomhanya kunogamha bhora ziso rinoramba rakatarisa pane bhora. Mupfungwa dzako bhora rinenge richiita sokuti harisi kufamba.
Panguva imwe chete, mashandiro anoita ziso anoita kuti uone kumhanya kunenge kuchiita bhora uye kuti ringanodonhera papi. Zvinoshamisa ndezvokuti zvose izvi zvinenge zvichiitika mutsinga dzinonzi retina. Tsinga dzinobva muziso dzichienda kuuropi dzinotumira mashoko kuuropi, uropi hwobva hwaziva zviri kudiwa hwokuudza kuti umhanye kunogamha bhora. Mashandiro anoita ziso chokwadi anoshamisa.
Chii chakaita kuti mubvume kuti Musiki ariko?
Muna 1990, ndakapedza mwedzi yakati kuti ndiri muDublin, kuIreland, ndichidzidza ndiri paTrinity College. Pataidzokera kumba ndiine mudzimai wangu Barbara, takakurukura nezveramangwana revana vedu. Takafungawo zvokushanyira hanzvadzi yangu uyo ari mumwe weZvapupu zvaJehovha. Hanzvadzi yangu yakandipa bhuku raLife—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? rakabudiswa neZvapupu. Zvandakaverenga zvakandishamisa nokuti zvakaratidza kuti pakaitwa ongororo yakasimba. Ndakabva ndaona kuti ndakanga ndabvuma dzidziso yokuti vanhu vakatanga vari mhuka ndisina kumbonyatsoongorora nyaya yacho. Somuenzaniso, ndaifunga kuti dzidziso iyi yokuti vanhu vakatanga vari mhuka inonyatsotsigirwa nezvisaririra zvemhuka kana kuti zvemiti zvava nemamiriyoni emakore. Asi ichi hachisi chokwadi. Kutaura chokwadi, pandairamba ndichiongorora nyaya dzokuti vanhu vakatanga vari mhuka, ndaibva ndatoona kuti dzidziso iyi haina uchapupu hwechokwadi.
Ndakafunga nezvebasa rangu rokugadzira zvidhori. Unyanzvi hwaani hwandiri kutevedzera?
Ndakafunga nezvebasa rangu rokugadzira zvidhori. Unyanzvi hwaani hwandiri kutevedzera? Ndaisazombofa ndakagona kugadzira chidhori chinogona kugamha bhora sezvinoita munhu. Chidhori chinogona kugadzirwa kuti chigamhe bhora kwete chichiita zvokuzvifungira. Hachikwanisi kuita zvinhu zvachisina kugadzirirwa kuti chiite. Uchenjeri hwedu hwakakura chaizvo kudarika zvinoitwa nemichina nokuti michina yacho yakatoita zvokugadzirwa nemunhu! Izvi nezvimwewo ndizvo zvakaita kuti ndipedzisire ndaona kuti kune Musiki.
Zvakafamba sei kuti muzova mumwe weZvapupu zvaJehovha?
Ndingangoti, zvavaiita ndizvo zvakaita kuti ini naBarbara tizvifarire. Kudzidza kwavaiita kwakanga kusiri kwokungobvuraudza-bvuraudza. Ndakashamiswa nezvinhu zvinonyorwa mumabhuku avo zvinoratidza kuti pakaitwa ongororo yakasimba. Vanhu vakafanana neni, vanofarira zvinhu zvine uchapupu uye zvinoratidza kuti pakaitwa ongororo yakasimba kwete kungonyora. Somuenzaniso, ndakanyanya kufarira nyaya dzouprofita dziri muBhaibheri. Kuongorora kwandaiita nyaya idzodzo dzouprofita kwakaita kuti ndione kuti chokwadi Bhaibheri rakabva kuna Mwari. Muna 1992, ini naBarbara takabhabhatidzwa seZvapupu zvaJehovha.
Kudzidza kwenyu nezvesayenzi kwakaderedza kutenda kwenyu here?
Kana, kwakatoita kuti kutenda kwangu kusimbe. Somuenzaniso, chimbofungai kuti tinokwanisa sei kuziva kuti uyu ndinhingi. Mumaawa mashoma shoma kacheche kazvarwa kanenge kava kutogona kuziva musiyano wezviso zvevanhu. Imi neni kana pane munhu watinoziva tinogona kumuziva kunyange ari pakati pemhomho yevanhu. Tinogona kuona kuti ari kufara here kana kuti akatsamwa. Asi chatisingazivi ndechokuti pane zvakawanda zvinoitika muziso nemupfungwa zvinozoita kuti tikwanise kuziva zvose izvi.
Kutaura chokwadi, ndinonyatsobvuma kuti mashandiro anoita ziso chipo chaicho chinobva kuna Jehovha Mwari. Zvipo zvaanotipa kusanganisira Bhaibheri, zvinoita kuti ndide kumutenda uye kuudzawo vamwe nezvake. Uyewo ini pachangu ndinonzwa ndichifanira kurumbidza Mwari pamusana pemabasa ake.